Isimo sezulu esihle kuma-Panda | Scrolla Izindaba
Isimo sezulu esihle kuma-Panda
Isiphepho esikhulu esilahle okungaphezu kweqhwa elijwayelekile e-Washington sinciphise idolobha futhi saletha isiminyaminya – kepha kwabayizindaba ezinhle kumabhele amakhulu.
Isiqiwu sezilwane e-Washington sinezilwane ezimbili ezingajwayelekile, okuthiwa i-Mei Xiang ne-Tian Tian, ​​ezaziyisipho esivela e-China saya eMelika ngesikhathi la mazwe amabili ayengabangane abangcono kakhulu.
Izintaba zase-China lapho ezivela khona zibanda kakhulu ebusika ngakho-ke ziyazi ukuthi yini okufanele ziyenze uma kuneqhwa: ukushelela, ukushibilika nokuqhwaza.
Sifisa sengathi abanye osopolitiki e-Washington bangalandela isibonelo sazo futhi bazijabulise ngokwengeziwe. Sizoba nokuvukela okumbalwa kanye ne-gridlock encane.